Isilivere yeArgos yentlanzi | Ngeentlanzi
El isilivere yeentlanzi zentlanzi Kukhetho olufanelekileyo kubathandi bamanzi acocekileyo abafuna ukuqala ukungena kwizinto zokuzonwabisa zaselwandle kuba luhlobo oluchasene nendalo ngokuzichasa ngokugqibeleleyo iindidi zekhemistry yamanzi. Nangona kuyacetyiswa ukuba uqhelisele kancinane.
Gcina ukhumbula ukuba oku iintlobo ezihlanganayo kufuneka zigcinwe kwiqela. Ke ngoko ilungele i-aquariums ezinkulu zomthamo ngenxa yobungakanani bayo. Ilinganisa kangange-40 cm endle. Kodwa ekuthinjweni ayihlali ngaphezulu kwe-20 cm ubude. Ngesi sizathu, kuyacetyiswa ukuba kugcinwe iintlanzi zeArgos kwii-aquariums ezingaphezu kweelitha ezingama-400.
Ngokubhekisele kwi-aquarium. Akukho zityalo ziya kubekwa. Ingakumbi kwinqanaba labo lolutsha, kuba ezi ntlanzi ziyathanda ukutya amagqabi kunye nobulembu. Ngenxa yobumnandi bayo kunyanzelekile ukuba ishiye indawo ebanzi ukuze idade. Inkqubo ye- ubushushu obulungileyo kufuneka bube phakathi kwama-20 nama-28ºC.
Luhlobo oludlayo. Yamkela zonke iintlobo zokutya ekutyeni kwabo, kubandakanya ukutya kweflake ukuba sele bekuqhelile ukusuka ebutsheni babo. Kukulungele ukukunika ukutya okungumkhenkce okanye okuphilayo kunye negalelo le-algae elinokubonelelwa ngohlobo lomxube.
Amanzi amtyuba afunyenwe kuwo kwinqanaba lolutsha amanqanaba ahlukeneyo etyuwa imini yonke. Eli nqaku livumela abatsha bokuzonwabisa baselwandle ukuba baziqhelanise nekhemistri yamanzi.
Su Eyona nto iphambili kuyo yimigca ethe nkqo emnyama ezizalwa emqolo kwaye ziphele emzimbeni zide zibe ngamanqaku. Iargos iintlanzi xa ziba ngabantu abadala zihlala zingazibonisi ezi ndawo. I-dorsal spines, ukongeza ekuchazeni kakhulu, inetyhefu. Akuyongozi. Nangona kwimeko yokuhlatywa, iya kubangela iintlungu ezininzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi olwandle » Isilivere yentlanzi
Shrimp yamanzi amatsha amakhulu